किन माथि पुग्दैन अफ्रिका ?- फिफा विश्वकप २०१८ - कान्तिपुर समाचार
किन माथि पुग्दैन अफ्रिका ?
लन्डन — ‘जति बेला म आइभोरी कोस्टका प्रशिक्षक थिएँ, एकपल्ट डिडियर ड्रोग्बालाई भनेको थिएँ– हामीसँग निकै राम्रा खेलाडी छन्, हामी विश्वकपमा लामो दूरी तय गर्न सक्छौं,’ स्येन गोरान इरिक्सनले भनेका रहेछन् । ड्रोग्बाको उत्तर थियो, ‘होइन, हामी सक्दैनौं ।’
यो कुराकानीको एउटै सन्देश हो, किन अहिलेसम्म कुनै अफ्रिकी देशले विश्वकप जित्न सकेको छैन त ? जबकि पेलेले सन् २००० भित्र अफ्रिकी देशले विश्वकप जितिसक्ने दाबी गरेका थिए, २० वर्षअगाडि नै ।
इरिक्सनले सन् २०१० मा राम्रोसँग बुझे । खासमा ड्रोग्बा नकारात्मक भएका थिएनन् । बरू उनी साँचो बोलिरहेका थिए । वास्तवमै अफ्रिकी देशले किन विश्वकप जित्न सक्दैन त ? ‘यसको उत्तर एक शब्दमा पाइन्छ र त्यो हो, संगठन,’ इरिक्सन अहिले भन्छन् । पेलेको भविष्यवाणी त्यति बेला सत्यसाबित हुने छाँट देखिएको थियो, जति बेला सन् १९९४ को विश्वकपमा अर्जेन्टिना र डिएगो म्याराडोनासम्मिलित समूहमा नाइजेरिया पहिलो भयो ।
फेरि ९० को दशकतिर जे जे ओकाचा र जर्ज वेहजस्ता खेलाडीले युरोपेली फुटबलमा तहल्का पनि मच्चाइरहेका थिए । तर जनसंख्याको आधारमा दोस्रो ठूलो महादेश अफ्रिका अहिलेसम्म सबैभन्दा माथि पुगेको भनेकै क्वाटरफाइनल हो । यस्तोमा उपाधि चुम्ने दाबी त धेरै टाढाको भयो । यहाँनिर के पनि सम्झिनुपर्छ भने अफ्रिकामा सर्वाधिक लोकप्रिय खेल पनि फुटबल नै हो ।
यसपल्टको विश्वकपमा इजिप्ट, मोरक्को, नाइजेरिया, सेनेगल र टयुनिसियाले अफ्रिकाको प्रतिनिधित्व गर्दै छन् । तर कसैमाथि फाइनलको छेउछाउ पनि पुग्ने विश्वास छैन । यसमा एक त क्यामरुनी डिफेन्डर लुरेन पनि हुन् । उनी भन्छन्, ‘कुनै दिन अफ्रिकी टिम सेमिफाइनल पुग्नेछ तर एउटा अर्को तथ्य के पनि हो भने हामी ठूला टिमको तुलनामा धेरै पछाडि छौं ।’
पछाडितर्फ अग्रसर ?
नाइजेरियाका जोन ओगु। तस्बिर : एएफपी
रुसमा जति टिमले विश्वकप खेल्छन्, त्यसमध्ये शीर्ष २० भित्र कुनै पनि अफ्रिकी टिम छैन । पूर्व नाइजेरियाली फरवार्ड पिटर ओडेमविन्गीलाई के लाग्छ भने अफ्रिकी फुटबल अगाडि होइन पछाडितर्फ अग्रसर छ । उनको तर्क छ, ‘अफ्रिकी फुटबल खासमा खस्किरहेको छ ।’ सन् २०१० र २०१४ को विश्वकप खेलेका यी खेलाडीले वेस्ट ब्रोम, कार्डिफ र स्टोकबाट पनि खेले । उनको भनाइ छ, ‘सन् १९९४ को विश्वकपमा नाइजेरिया अफ्रिकी टिममध्ये उत्कृष्ट थियो ।’
हामीले विश्व फुटबलमा सनसनीपूर्ण खेल प्रदर्शन गरिरहेका थियौं । हामीले ब्राजिल र अर्जेन्टिनाजस्ता टिमलाई हराएर सन् १९९६ को ओलम्पिक स्वर्ण जितेका थियौं । सबैले अनुभव गर्न थालेका थिए । हो, हामीले अब केही गर्न सक्छौं ।’ तर रुसमा छैटौंपल्ट विश्वकप खेल्न लागेको नाइजेरिया त्यो उपलब्धिबाट अझ धेरै टाढा नै छ । अहिलेसम्म तीन टिमले क्वाटरफाइनल यात्रा तय गरेको छ । त्यो सफलता क्यामरुन, सेनेगल र घानाले पाएको हो ।
यी त भए सहारा नजिकका अफ्रिकी टिम । यसपल्ट रुसमा उत्तर अफ्रिकी टिमको बढी प्रतिनिधित्व छ । ती हुन्, इजिप्ट र मोरक्को । इजिप्ट २८ र मोरक्को २० वर्षपछि विश्वकप खेल्दै छन् । उत्तरी अफ्रिकाका अधिकांस खेलाडी विदेशमा जन्मेका छन् वा युरोपेली क्लब फुटबलमा यो खेल सिकेका छन् । ओडेमविन्गी के मान्छन् भने उत्तर अफ्रिकी खेलाडी अरुको तुलनामा बढी चलाख हुन्छन् र उनीहरूको शारीरिक बनावट पनि फरक छ ।
‘जति बेला एन्थोनी जोसुआले फ्लोएड मेवेदरसँग बक्सिङमा भिड्दा के हुन्छ, यस्तै स्थिति सहारा नजिकका खेलाडी र उत्तरतिरका खेलाडीबीच तुलना गर्दा हुन्छ । उत्तरतिरका खेलाडी केही दुब्ला छन् । उनीहरू छरितो हुन्छन्, फ्रि–किक चाँडै लिन सक्छन् । उनीहरूको मानसिक स्थिति पनि बलियो छ,’ ओडेमविन्गी भन्छन् ।
विवाद र बहिष्कार
सन् २०१४ मा क्यामरुन, घाना र नाइजेरियाली टिम गलत कारणले समाचारमा छाए । पारिश्रमिक नपाएको झोंकमा घानाका खेलाडीले अभ्यास नै बहिष्कार गरे । पछि सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक पर्‍यो र उसले ३० लाख डलर पठाउनुपरेको थियो । क्यामरुनी खेलाडी यस्तै विवादका कारण दक्षिण अफ्रिकामा ढिलो पुगे । यसपल्टको विश्वकपमा खेलाडीले पाउने सुविधाका लागि नाइजेरियाली खेलाडी र त्यहाँको एफएबीच सम्झौता नै आवश्यक भयो ।
टयुनिसियाका पूर्व विश्वकप डिफेन्डर राघी जाइडी मान्छन्, वचनअनुसार काम नहुनु नै समस्या हो । उनी भन्छन्, ‘युरोपतिर खेलाडीले देशका लागि खेल्छन् र पाउनु सबै सुविधा समयमै पाउँछन् । अफ्रिकातिर आफ्नो देशका लागि खेल्दा भने यस्तो हुन्न । खेलाडीले खाली झुटा आश्वासन मात्र पाउँछन् ।’ त्यसो त उत्तरी अफ्रिकाका खेलाडी र संघबीच यस्तो विवाद भएको बिरलै पाइन्छ ।
अफ्रिकामा यस्तै हुन्छ
इरिक्सनले सन् २०१० मा आइभोरी कोस्ट सम्हाल्दा टिममा ड्रोग्बासँगै सलोमन कलोउ र याया टाउरे जस्ता खेलाडी थिए । ड्रोग्बा र कलोउले त चेल्सीका लागि इंग्लिस प्रिमियर लिग पनि जितिसकेका थिए । तर टिमको तयारी निकै कमजोर थियो । पोर्चुगल, ब्राजिल र उत्तर कोरियासम्मिलित समूहमा परेको थियो, आइभोरी कोस्ट । स्वीट्जरल्यान्डविरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न ड्ेरसिङ रुम छिर्दा खेलाडीको सर्ट, किट केही पनि थिएन, जबकि खेल सुरु केही समयमात्र बाँकी थियो ।
उनी भन्छन्, ‘खेल सुरु हुन ४५ मिनेटअगाडि किट आइपुग्यो र ती दुई ठूला ब्यागमा थिए । सबै खेलाडी आफूलाई मिल्ने किट खोज्न व्यस्त रहे । खेल सुरु हुनैलाग्दा एक खेलाडीले भनेमा थिए, म खेल्न सक्दिनँ । मैले प्रश्न गरें– के तिमी घाइते छौं त ? उनको उत्तर थियो– होइन, मेरो त बुट नै छैन ।’ त्यति नै बेला ड्रोग्बाले इरिक्सनलाई भनेछन्, ‘अफ्रिकामा यस्तै हुन्छ, गोरान ।’
प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७५ ०८:३६
नोयर, अनि जर्मनीको भाग्य
अधिकांस बाजी राख्ने संस्थाका तथ्यांकका अनुसार यसपालि ब्राजिलको सम्भावना नै बढी छ
वासिङटन — इंग्लिस खेलाडी ग्यारी लिनेकरले भनेका थिए, ‘फुटबल एकदम सामान्य खेल हो । २२ खेलाडी ९० मिनेटका लागि मैदानमा बलको पछाडि लाग्छन् र अन्त्यमा खेल जर्मनीले जित्छ ।’ यो पंक्ति साहित्यिक रूपमा जति सान्दर्भिक सुनिन्छ, त्यति नै बढी यथार्थपरक पनि छ ।फेरि एकपल्ट जर्मनी विश्वकपमा उपाधिको दाबेदारमा सहभागी हुँदै छ ।
यसपालिको जर्मन टोली सन् २०१४ मा एकपक्षीय रूपमा उपाधि जित्ने टोलीभन्दा अझै सुधारिएको छ । फिफा वरीयताअनुसार पनि जर्मनी शीर्षस्थानमा छ । अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगितामा जर्मनीले जुलाई २०१६ यता कुनै खेल हारेको छैन । यसपालि रुसमा छनोट हुने क्रममा टोलीले युरोपेली छनोटका सबै १० खेलमा जित पायो । यो उपलब्धि यसअघि सन् २०१० को स्पेनी टोलीले मात्र प्राप्त गरेको थियो ।
जर्मन टोलीमा विश्वका उत्कृष्टमध्येका गोलरक्षक म्यानुयल नोयर छन् । उनले सन् २०१४ को विश्वकपमा गोल्डेन ग्लोभ्स नै जितेका थिए । अझै पनि टोलीमा प्रशिक्षक जोचिम लो नै छन् । सन् २००६ मा योर्गन क्लिन्समनको स्थानमा जर्मन टोली सम्हालेका लोले त्यसयता अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा असीमित सफलता हात पारेका छन् ।
यसका बाबजुद लगातार विश्वकप उपाधि जित्नु सहज भने हुने छैन । हालसम्म दुईपल्ट मात्र विश्वकप उपाधि रक्षा सफल भएको छ । सन् १९३४ र १९३८ मा इटालीले विश्वकप उपाधि रक्षा गरेको थियो भने सन् १९५८ र ०६२ मा ब्राजिलले सो उपलब्धि हासिल गर्‍यो । जर्मन टोलीमा प्रतिभाशाली खेलाडीको कुनै कमी छैन, तर युगान्तकारी स्टार खेलाडी भने यो टोलीमा छैनन् । डिफेन्डिङ च्याम्पियन हुनुका बाबजुद टोलीमा अनुभवको कमी छ । सन् २०१४ विश्वकप जित्ने टोलीका ९ खेलाडी मात्र रुस जाने टोलीमा छन् । टोलीको औसत उमेर २७.१ वर्ष छ,
जुन प्रतियोगिताकै छैटौं युवा टोली हो ।
जर्मनीको विश्वकप जित्ने लक्ष्यमा कप्तान नोयरको भूमिका मुख्य हुनेछ । उनका सहकर्मीले पनि उनलाई टोलीका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खेलाडी मानेका छन् । उनी बल खुट्टामा हुँदा टोलीका डिफेन्डर भन्दा पनि संयमित देखिन्छन् र उनमा डिफेन्सझैं काउन्टर अटयाकको सुरुआत गर्ने क्षमता पनि छ । ९ महिनाको चोटपछि गतसाता सम्पन्न मैत्रीपूर्ण खेलमा उनले पुनरागमन गरे । उनको अनुभव र नेतृत्वसँगै जर्मनीका वैकल्पिक गोलरक्षकको प्रदर्शन राम्रो नहुनुले पनि उनको भूमिका महत्त्वपूर्ण बनेको हो ।
रुसी विश्वकपका लागि तयार जर्मनी टोलीका खेलाडी ।
मैदानको अग्रभागमा जर्मनीको सम्पूर्ण भर थोमस मुलरमाथि हुनेछ । नोयरसँगै तेस्रो विश्वकप खेल्ने तयारीमा रहेका मुलर पनि सानो चोटबाट ठीक हुँदै छन् । करिअरको सुरुआतमा गोलकर्ताको भूमिका निभाएका मुलरले सन् २०१० को विश्वकपमा गोल्डेन बुट जितेका थिए । पछिल्ला केही सिजनमा भने उनले बायर्नबाट गोल सिर्जना गर्ने भूमिका निभाइरहेका छन् । मुलर यसपालि पछिल्ला संस्करणको लय कायम गर्ने सुरमा हुनेछन् । यदि जर्मनीले अपेक्षित प्रदर्शन गर्न सकेन भने त्यसको कारण मुलर आफ्नो भूमिकामा खरो उत्रन नसकेको पनि हुनेछ ।
सन् २०१४ मा आयोजक ब्राजिलविरुद्ध ७–१ को जित दर्ता गरेको स्मरणयोग्य सेमिफाइनलमा मुलरले नै पहिलो गोल गरेका थिए । यसपालि पनि जर्मनीको उपाधि यात्रामा त्यही ब्राजिलियन टोली बाधक बन्न सक्छ । अधिकांस बाजी राख्ने संस्थाका तथ्यांकका अनुसार यसपालि ब्राजिलको सम्भावना नै बढी छ ।
नकआउट चरणमा पुगेपछि खेलतालिकाले पनि ठूलो भूमिका खेल्नेगर्छ । यसपल्ट जर्मनीको सम्भावित खेलतालिका पनि टोलीलाई सहयोग गर्ने खाले छ । समूहमा रहेको अर्को बलियो टोली मेक्सिको छ भने अर्को चरणमा सम्भावित विपक्षी स्वीट्जरल्यान्ड, सर्बिया वा कोस्टारिका रहनेछन् । यी खेल त्यति सहज नभए पनि गाह्रो भने छैन । त्यसपछिका सम्भावित प्रतिद्वन्द्वी इंग्ल्यान्ड, बेल्जियम वा कोलोम्बिया भने जर्मन टोलीका लागि टाउको दुखाइ बन्नसक्नेछन् । यो चरण पार गरेर अर्को एक जित हासिल गरे जर्मनी लगातार विश्वकप फाइनलमा पुग्नेछ ।
जब खेलको महत्त्व बढ्दै जान्छ, खेलको रुप पनि गम्भीर हुन्छ । यो अवस्थामा टोलीको भविष्य छिनोफानो डिफेन्सले गर्छ । सामान्यतया गोलरक्षक त्यसका नायक हुन्छन् । र जर्मनी यस दशककै सबैभन्दा उत्कृष्ट डिफेन्स लिएर रुस जाँदै छ ।
– द वासिङ्टन पोस्ट
प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७५ ०८:३३